Zụrụ Ndị Na-eso Pinzọ Pinterest - SoNuker
Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụrụ Soro Pinterest?
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta ndị na-eso Pinterest?
Ndị na-eso ụzọ na profaịlụ gị bụ otu n'ime ihe mbụ ndị ọbịa na profaịlụ gị na-ele. O nwere ike ime ka ha kpebie ozugbo ma ebe ahụ isoro gị ma ọ bụ lelee profaịlụ gị. Nnyocha egosiwo na mgbe inwetakwu ndị na-eso ụzọ, mmasị, echiche na echiche ị nwere ike ịnweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ. Na Pinterest na - emelite ma ọ bụ na - agbanwe algọridim ha ọ na - esiwanye ike wuo akaụntụ gị.
Mgbe ịzụrụ ndị na - eso Pinterest na onye na - eweta aha ọma ka anyị ọ na - enye profaịlụ Pinterest nke ọ bụla, ọ dị mkpa ka ọ hụ ya ma nwee mgbanwe dị elu nke ịmepụta mmetụta nje ma ọ bụ iwulite ihe ọkụkụ.
Kedu mgbe a ga-anapụta Folmụazụ M Pinterest?
Ọrụ anyị dị mma nke 100% maka iji. N’adịghị ka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ, anyị anaghị arịọ ma ọ bụ jupụta paswọọdụ nchekwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Ya mere, anyị anaghị achịkwa akaụntụ gị ma ọ bụ na-agwa ya ka anyị mee ihe ọ na-ekwesịghị ịdị. Anwalela ọrụ anyị anyị nyere ọtụtụ ọnụọgụ ma na-aga n'ihu imelite ma nwekwaa na ngwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji hụ na ebumnuche kacha mma na nsonaazụ kacha mma.
SoNuker.com enyela ọkaibe na ntanetị mmekọrịta ọhụụ nke Social Media Marketing.
Mmasị nke 100 ($ 15) Mmasị nke 200 ($ 30) Mmasị nke 500 ($ 45) Mmasị nke 1000 ($ 80) Mmasị nke 2000 ($ 160) Mmasị nke 5000 ($ 300) Mmasị nke 10000 ($ 700) Mmasị nke 20000 ($ 1200) Mmasị nke 50000 ($ 2200)
Ndị na-eso 100 ($ 10) Ndị na-eso 500 ($ 15) Ndị na-eso 1000 ($ 25) Ndị na-eso 2500 ($ 50) Ndị na-eso 5000 ($ 90) Ndị na-eso 7500 ($ 125) Ndị na-eso 10000 ($ 150)